DHAGEYSO: Howlgallo ka dhan ah Al-shabaab oo ka socda gobolka Bakool - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka DHAGEYSO: Howlgallo ka dhan ah Al-shabaab oo ka socda gobolka Bakool
DHAGEYSO: Howlgallo ka dhan ah Al-shabaab oo ka socda gobolka Bakool
Howlgallo ka dhan ah ururka Al-shabaab ayaa maalmahan waxa ay ka socdeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Bakool.
Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool Maxamed Cabdulle Food Cadde ayaa sheegay in tuulooyin fara badan oo hoos yimaada degmada Tiyeeglow ay ka saareen ururka Al-shabaab.
Dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay in howlgaladan ay wax badan ka bedeli doonaan amaanka degmada Tiyeeglow, iyadoo uu sheegay in dhowaan ay isku furi doonaan degmada Xudur iyo Tiyeeglow oo isku jira 90 KM.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa amaro ku bixiyay in howlgaladan laga bilaabo degmooyinka gobolka Bakool, waxaana hada ay howlgalaasi ka socdaan degmooyinka Xudur, Waajid iyo Tiyeeglow oo ka tirsan gobolka Bakool.
Previous articleDHAGEYSO: Barnaamijka Dhalinyarada xubinta Sooyaalka Africa 02-05-16
Next articleDembele oo weerar afka ah ku qaaday saxiibkiisa Eden Hazard
Kenya oo ka hadashay dagaalkii Beled-Xaawo qoraalna u dirtay Midowga Afrika
SAWIRO:-Maxkamadda Ciidamada oo la horkeenay rag loo heysto Shabaabnimo
Soomaaliya & Qatar oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah
Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Puntland & Wakiilka QM ee Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya oo dib u Fasaxday Jaadka
DHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 25-01-2021
DHAGEYSO: Warka Habeen 24-1-2021
DHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 24-01-2021
Dowladda Kenya ayaa ka hadashay dagaalka magaalada Beled-Xaawo, oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubeysay Kenya. Wasaaradda arrimaha dibedda...